World Championship | October 2021
Isi > World Championship
Asọmpi asọmpi mba ụwa 2020 uci
Asọmpi asọmpi Uci nke afọ 2020 - ụzọ bara uru
Wonnye meriri UCI Men’s Road Race 2020? Onye France bụ Julian Alaphilippe
Usọ ụzọ egwuregwu ụwa na-ebi
Uci road Championship ụwa - otu esi emeso
Ebee ka m nwere ikele UCI Road World Championship? Can nwere ike ilele UCI Road World Championship, Vuelta a Espana, Tour de France, Giro d'Italia na ọtụtụ agbụrụ ndị ọzọ n'oge oge niile na HD LIVE na On Demand site na Fubo TV.27.09.2020
n'asọmpi cyclocross ụwa
Cyclocross World Championship - olee otu Anyị Si Edozi Ya
Kedụ ka m ga-esi lee Cyclocross World Championship na 2020? Ọ bụrụ na ị nwere ndenye aha, NBC Sports ga-asọpụta ụbọchị abụọ nke UCI Cyclocross World Championship na ọwa Olympic na Egwuregwu Gold, yana NBCsports.com.
Uci ụwa ogo
Uci ụwa ogo - ihe ngwọta nke nsogbu
Kedu onye na-agba ịnyịnya ígwè kacha mma n'ụwa? 10zọ 10 Ndị Kasị Ukwuu Cyclists nke Oge niileFausto Coppi. 8 nke 12.Jacque Anquetil. 7 nke 12. Miguel Indurain. 6 nke 12. Alfredo Binda. 5 nke 12. Lance Armstrong. 4 nke 12. Gino Bartali. 3 nke 12. Sean Kelly. 2 nke 12. Alberto Contador. 1 nke 12.
ugwu kacha sie ike n'ụwa
Ugwu kacha sie ike n'ụwa - azịza ya metụtara usoro
Mmadu ole rigoro 5.15? Ndi ugwu 82 di iche-iche ekwuola ugbua opekata mpe otu nrigo 5.15a. Stefano Ghisolfi ghọrọ onye nke anọ na-arị ugwu na akụkọ ntolite ịrịgo 5.15c (mgbe Ondra, Sharma, na Megos). Ihe ndị a niile sitere na Margo Hayes, Anak Verhoeven, na Angy Eiter na 2017.25.09.2019
mmeri nke oge ụwa
Asọmpi nnwale oge ikpe ụwa - kedu ka ị ga-esi kpebie
Oge ole ka UCI World Championship dị? Daysbọchị 9
igwe kacha agba ọsọ n'ụwa 2016
Kasị igwe kwụ otu ebe na ụwa 2016 - a ngwọta na-
Kedu igwe ịnyịnya igwe kachasị ọsọ n'ụwa?
cyclocross onye mmeri uwa
Cyclocross onye mmeri ụwa - olee otu anyị si edozi
Nye meriri na cyclocross Championship? Mathieu van der Poel gbakere site na nsogbu nke ukwu nke abuo tupu ya etinye ihe igwe eji agba agba agba agba agba agba agba agbaji iji nweta aha ndi cyclo-cross nke ndi isi. Nwa nke 26 mejuputara mkpochapu nke ndi uwa maka Netherlands site na UCI Cyclo-cross World Championship na obodo Belgian nke Ostend.
Uche ụzọ World Championship rụpụtara
Uci road Championship World results - Akwụkwọ zuru ezu
Onye nwetara mmeri mba ụwa n'okporo ụzọ 2020? Julian Alaphilippe
kọfị kachasị mma n'ụwa
Kọfị kacha mma n'ụwa - olee otu anyị ga-esi edozi
Kedu kọfị kacha nwee ahụ ike? Mkpebi: Ọchịchọ gbara ọchịchịrị nke Arabica bụ kọfị mara mma maka ndị chọrọ igbochi caffeine n'ebughị mmanya decaf. Blonde Robusta, n’aka nke ọzọ, ga-enye gị nnukwu uzu.
agbụrụ kacha ogologo n'ụwa
Ogologo agbụrụ kachasị n'ụwa - ajụjụ na azịza ndị edepụtara
Kedu ọsọ ọsọ kachasị sie ike n'ụwa? Egwuregwu isii kacha sie ike na World Marathon des Sables. Emere na Morocco kwa afọ, Marathon des Sables na-akwụ ụgwọ onwe ya dị ka 'ụzọ kachasị sie ike n'ụwa.' Ndị sonyere na-ekpuchi kilomita 156 n'ime ụbọchị isii. Badwater Ultramarathon. Hardrock Narị Mile Ntachi Obi Run.18. 2011.
ndenye aha ụwa nke ndị na-agba ọsọ
Ndebanye aha dijitalụ nke ndị na-agba ọsọ - otu esi edozi
Ego ole bụ ndenye aha Runwa? Otu afọ kemgbe mmalite, ndị na-agba ọsọ World + nwere ndị ntinye aha 18,000 na ndị 13,500 nọ n'ọrụ ugbu a, 60% n'ime ha abanyela aha maka ndebanye aha kwa afọ, nke na-efu $ 50, ma ọ bụ $ 30 maka ndị debanyere aha ha dị ugbu a. 10.03.2020
Uzo Ulo Ogwuregwu World Championship
Uci ụzọ World Championship - ụzọ nwere ike isi nweta ya
Ebee ka m nwere ikele UCI Road World Championship? USA Cycling kwupụtara na Septemba 4th, 2020 ndị egwuregwu ga-anọchi anya United States na Elite Ndị nwoke na Oge Nwanyị na andzọ Egwuregwu na asọmpi Ulo Okpuru Ulo nke 2020 nke ga-eme na Imola, Italy na Septemba 24-27, 2020. Nwere ike ịlele ọduọ niile na-ebi na Channel Channel.
ndị na-agba ọsọ ụwa ụfụfụ ala
Ndị na-agba ọsọ ọsọ na-agba ụfụfụ ụwa - olee otu ị ga-esi dozie
Ndị ụfụfụ ụfụfụ dị mma maka ndị ọgba ọsọ? Fụfụ ụfụfụ bụ ụzọ dị mma iji gbatịa ahụ ike gwụrụ gị mgbe ị gbachara ọsọ, yana inye aka igbochi mmerụ ahụ. Na-agba ọsọ na-agba ụfụfụ gị nwere ike inyere gị aka kpoo iji mee ka ọbara na-asọba na akwara ọrụ.
agba ọsọ ọsọ ụwa marathon
Atụmatụ ọsọ nke ọkara ọsọ ọsọ ọsọ ndị agba ọsọ - ihe ngwọta ga-adịgide adịgide
Oge 2 ọ bụ 30 dị mma oge marathon ọkara? Isetịpụ Ihe Mgbaru Ọsọ Gị ishingmecha ọkara marathon n'ihe na-erughị awa abụọ bụ ihe mgbaru ọsọ ndị ọsọ ịgba ọsọ maramara tozuru oke. Ndị na-asọmpi asọmpi na-achọsi ike maka ihe mgbaru ọsọ siri ike, dịka elekere 1 na 30 nkeji ọkara marathon (6: 51 nkeji kwa kilomita ije ma ọ bụ ngwa ngwa).
nwanyị kachasị ọsọ n'ụwa 2016
Nwanyị kachasị ọsọ n'ụwa 2016 - azịza nkịtị
Kedu onye bụ nwanyị kachasị ọsọ na ụwa 2020? Shelly-Ann Fraser-Pryce ghọrọ nwanyị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na ndụ, na-agba ọsọ 100m kachasị mma kemgbe Florence Griffith Joyner. Naanị otu nwanyị n'akụkọ ihe mere eme agbaala ụmụ nwanyị ọsọ 100-ọsọ karịa Shelly-Ann Fraser-Pryce mere na Satọde: Florence Griffith Joyner. 5. 2021.
ndị na-agba ọsọ ụwa yoga maka ndị ọgba ọsọ
Yoga ụwa nke ndị na-agba ọsọ maka ndị ọgba ọsọ - azịza ohuru
Kedu ihe kacha mma yoga maka ndị ọgba ọsọ? A na-adọta ndị na-agba ọsọ, dị ka ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu, iji mee ngwa ngwa, yoga siri ike dịka Ashtanga ma ọ bụ yoga dị ọkụ, dị ka Bikram.
Uche World Championship 2019 nsonaazụ
Uci World Championship 2019 nsonaazụ - otu esi enweta
Kedu onye meriri asọmpi asọmpi UCI nke ụwa? Mark Cavendish (etiti) okpueze Onye Ọchịchị ụwa na-eso agbụrụ 2011. Alejandro Valverde meriri agbụrụ 2018 n'okporo ụzọ na Innsbruck.
Uci World Championship 2020 - ị nweta azịza
Onye bụ onye mmeri UCI ugbu a? Mark Cavendish (etiti) okpueze Onye Ọchịchị ụwa na-eso agbụrụ 2011. Alejandro Valverde meriri agbụrụ 2018 n'okporo ụzọ na Innsbruck.